La noqo kii hore: Haa ama maya? Soo ogow faa iidooyinka iyo qasaaraha | Ragga Stylish
Waxaan wada leenahay lammaane xiriirkoodu ku dhammaaday kala tag oo uusan shaqeyn. Kiiskan, kula soo noqo hore Mid baa fikrad fiican noqon kara iyadoo kuxiran duruufaha burburka iyo shaqsiyadaada. Qaar ka mid ah cilaaqaadka jacaylku waxay layaab ku yeeshaan wareegga labaad, laakiin kuwa kale waxay u muuqdaan inay maraan xaalad ka xun tii ugu horreysay.
Sidaa darteed, waxaan kuu sheegeynaa waxa saynisku leeyahay, faa iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka aad kula laaban karto saygaagii hore.
1 Faa'iidooyinka ku soo noqoshada hore
2 Faa'iido-darrooyinka dib ula soo noqoshada hore
3 Gunaanad saynis
Faa'iidooyinka ku soo noqoshada hore
Khubarada qaar ayaa baaray faa iidooyinka dib ugula soo noqoshada lamaanahaagii hore xaalada hada jirta. Hadday ka mid yihiin kuwa isku dayaya inay mar kale isku dayaan, waa iyaga oo faraxsan. Ilaa ay noqoto xiriir wasakh ah, oo aan caafimaad qabin oo aad si joogto ah ula dagaallantay una soo noqonaysay, maxaa yeelay waxaa jira xiriir sun ah. Si kastaba ha noqotee, haddii xiriirku uu ahaa mid aad u wanaagsan oo uu jiro jacayl iyo isfaham, waxaa jiri kara mar labaad. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaanay jirin fursad saddexaad.
Haddii ay go'aansadaan inay dib u soo celiyaan xiriirkii, looma baahna inay maraan nidaamka caadiga ah ee lagu ogaanayo kan kale, ama sariirta ama nolol maalmeedkooda ka baxsan galmada. Maya, mar dambe uma baahnid inaad qiyaasto makhaayada uu ugu jecel yahay ama waxa uu neceb yahay inaad adigu sameyso. Ma seegi doontid hadiyadda sannad-guurada koowaad ee wareegga labaad. Haddaba, su’aalahan muhiimka ah ayaa mudan in la isweydiiyo intaadan dib ugu noqon. Ku noqoshadaada waxay noqon kartaa mid aad u kacsan sayniska. Kuwa xaaladdan soo maray waxay leeyihiin sidaas waa mid jacayl badan oo galmo kacsan. Tani badanaa waxay dhacdaa maxaa yeelay hormoonnada qaarkood ayaa la hawl geliyaa sida ay u dhacaan marka aad sameysid galmo isku-qurxin ah, taas oo inta badan naxariisdarro ah dagaal kadib.
Waxaas oo dhami waa inay la xiriiraan habka kiimikada ee maskaxda ka dhigaya kuwa jecel inay dareemaan firfircooni badan iyagoo dib u soo ceshanaya wax ay umuuqdeen inay lumiyeen. Faa'iidooyinka ay leedahay dib ula soo noqoshada saygaagii hore ayaa ah inaadan khaladaad isku mid ah sameyn doonin.
Ku noqoshada lammaanihi hore waa dhaqan qaan gaar ah, oo tilmaamaya inaad diyaar u tahay inaad tillaabooyin u qaado xasiloonida. Haddii sababtu tahay nasashada ugu dambaysa ay caddahay, hubaal mar dambe qalad la mid ah kuma dhici doonaan xiriirkuna wuxuu noqon doonaa mid hufan oo iswaafajiya. "Kuwa aan fahmin taariikhda waxaa loogu talagalay inay ku soo celiyaan isla qaladaad" weedhan ayaa macno cusub ku leh dhanka jacaylka. Dabcan, markan sheekadaadu waxay noqon kartaa mid faraxsan, oo jacayl iyo galmo ka buuxo, khilaaf la'aan, taasoo u horseedaysa inay mar kale soo afjaraan oo ay mar kale sii wada seegaan.
Haddii aad dareento raaxo la'aan asxaabta qaar oo isla nool kadib kala tagga, xaaladdu way fiicnaan doontaa isla kooxdii asxaabta ee horena way midoobi doonaan. Haa, uma baahnid inaad dib ugu soo celiso waalidiintaada iyo asxaabtaada lamaanayaasha cusub.
Faa'iido-darrooyinka dib ula soo noqoshada hore
Sida aad u yeelan karto faa'iidooyin dhowr ah sida kuwa aan soo sheegnay, waxaa sidoo kale jiri kara waxyeellooyin. Seynisyahannadu sidoo kale waxay ku barteen qaybtaan aragtida kale. Falcelinta ku tiirsanaanta waxaa sababa isku darka dopamine iyo oxytocin. Waa sabab neerfaha oo la xiriirta qofka ku soo laabanaya xiriirkiisii ​​hore. La soo noqoshada asxaabtaada hore waxay muujineysaa inaad ku tiirsanaan karto noocyada maandooriyahan ah iyo wareegga xun.
Waxa kale oo dhici karta in khibraddu isku mid ahayn. Mararka qaar kolka lammaanuhu ay soo noqdaan ka dib markii ay kala tageen, waxaa laga yaabaa in ay ka mid tahay hilowga ama u hammiga sheeko ay wada noolaayeen laakiin taas xaalku ma aha. Sidaa darteed, waxay tahay in lamaanayaal badan ay isku dayaan inay mar kale sii wadaan. Dhibaatadu waxay tahay in u janjeedha in loo maleeyo in wax aad u cajaa'ib badani abuuri karaan jahwareer ku yimid filashooyinka aan u adeegin inay la kulmaan. Waana in labadoodaba laga yaabo inay dano kale leeyihiin, inay beddeleen falsafaddoodii nololeed ama ay si fudud mar horeba noogu fahmeen sidii horeba. Tani waxay hoos ugu sii dhaceysaa inay yeelato xiriir tayo hoose leh markale.
Waa inaad calaamadeysaa suurtagalnimada inaad qof kale la kulanto. Waana haddii aad dib ula laabato odaygaagii hore inaad lumisay suurtagalnimada inaad qof kale la kulanto. Xaqiiqda soo noqoshada xiriirka waxay muujineysaa inaad albaabka uxireyso inaad ogaato wax cusub oo aad xaddido xulashooyinkaaga. Mararka qaar way adag tahay in laga baxo aagga raaxada, laakiin dad badan ayaa kula soo noqda isla xiriir tan iyo markaas Iyagu ma ahan kuwo amni ah oo waxay horey u leeyihiin wax caymis.
Mid ka mid ah cillado waaweyn, tani waxay ku dambayn kartaa mid ka sii xun. Haddii aad rabto inaad dib ula soo noqoto aabbahaa hore, waa sababta oo ah iyagu aakhirkii inay noqdaan cadaw. Si kastaba ha noqotee, markaad noqotid lamaane markale, sheekada waxaa laga yaabaa inaysan quruxsaneyn dhamaadka. Way imaan karaan inay is necbaadaan. Suurtagalnimada in arrimuhu si aad u xun ku dhammaan doonaan waa mid ka mid ah farqiga weyn ee soo noqnoqonaya ex.
Daraasadaha sayniska ee ku saabsan haddii ay ku habboon tahay iyo in kale oo aad la soo noqon karto qofkaagii hore waxay muujineysaa in gebi ahaanba suurtagal tahay in la dareemo jacayl dhab ah oo lamaane hore ah iyo in dib loogu bilaabo jacaylkii uu ka tagay. Maskaxda ku hay in sayniska sheeganayo in waqtiga dheer Lammaanaha is jecel waa in ay kala maqnaadaan muddo dhan 6 bilood.
Tirakoobyadu waxay muujinayaan in ka badan saddex-meelood meel cilaaqaadka dhammaada in la siin doono fursad labaad mar uun. Badanaa waxaa la sheegaa in arrimuhu ay kala duwanaan doonaan markii labaad oo isku day la sameeyay si loo hagaajiyo loona saxo dhammaan khaladaadkii hore. Rajo-qabka waa inuu ku xirnaadaa waqtiga la galiyay xiriirka iyo caajiska raadinta inaad hesho lamaane kale oo cusub. Iyaga ayaa sidoo kale lagu ilaaliyaa sida loo oggol yahay ilaha dareenka ee la yaqaan.
Sida aad arki karto, waa inaad si taxaddar leh u falanqeeysaa dhammaadka iyo bilowga burburka lammaanaha si aad u ogaato haddii ay kugula talin karto inaad kula soo noqotid qofka aad is guursateen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » La noqo hore